Akusekho mabala angaboniyo anempawu zikaMosisi- iGeofumadas
Azisekho iindawo ezingaboniyo ngemisebenzi kaMoses
NgoSeptemba, 2019 Geospatial - GIS, ezintsha
Ngaphandle kwamathandabuzo, elona cala lihle xa usebenza ngemifanekiso yesatellite kukufumana eyona mifanekiso ifanelekileyo kwimeko yokusetyenziswa, yithi, Sentinel-2 okanye Landsat-8, egubungela ngokuthembekileyo indawo yakho yomdla (AOI); ke, ivumela ukufumana ngokukhawuleza idatha echanekileyo kunye nexabisekileyo njengesiphumo sokwenza.
Ngamaxesha athile, amanye amacandelo e-AOI yakho, ngakumbi kwii-AOI ezinkulu ezigubungela izigcawu ezininzi, kunye nee-AOIs ezikufuphi okanye kwimiphetho yeziqendu, zinokuhlala ngaphaya kwemida yendawo yangoku. Ezi ngxaki zokujoyina imifanekiso yokuhlanganisa zingakhokelela kuhlalutyo oluyinxalenye kunye nokulahleka kolwazi oluxabisekileyo.
KaMoses wazalwa ukusombulula iingxaki zomanyano lwemifanekiso
UMosaic wenziwe ukusuka ekuqaleni njengento elula ukuyisebenzisa ekuvumela ukuba udibanise, udibanise kwaye ubone imbonakalo eqingqiweyo evela kwi-sensor, ukuya kumfanekiso, we-AOI ethile kunye nexesha ledatha elifunekayo.
Zonke izigcawu ezikhoyo zomhla ezifunekayo zidityanisiwe kwaye i-AOI igutyungelwe kwi-100%.
Isisombululo silula kwaye sisebenza kangangokuba kuyamangalisa ukuba khange kwenziwe ngaphambili.
Iziseko zikaMoses ezifumaneka kwizixhobo ze-GIS
Kukho iindlela ezahlukeneyo Ukwenza eyakho kaMosisi, unokukhetha ngokukhawuleza ezona zilungele iimfuno zakho.
Ukugubungela umhlaba kukaMoses
UMosaus udityaniswa kuzo zonke iidatellite zesipayisi ngosuku.
UMosaic wenziwe wangqongqo ngaphakathi kwendawo eqinisekisiweyo yomdla (AOI).
Umsebenzi kaMoses wenza njani kwiLandViewer?
Umbono weLandV (LV), kwaye, inikezela ngokudityaniswa kweendlela, oko kukuthi, umsebenzisi uzoba i-AOI. Emva koko inkqubo isonga i-AOI kwibhokisi yejometri ethile echaziweyo ejikeleze i-AOI, ngokusekwe kwimifanekiso eya kuthi inikezelwe. Umzekelo, kwimeko apho i-AOI isetyhula, i-mosaic iya kumelwa ngaphakathi kwesikwere esikhankanyiweyo.
Kuxhomekeka kwindlela esekwe ngayo i-AOI, umsebenzisi uya kufumana enye yezi ziphumo zilandelayo:
Ukuba ulahla uphawu lokuphawula kwimephu, isoftware iya kuvelisa uluhlu lweziganeko ezizodwa, njengoko wenzayo ngaphambili.
Ukuba uzoba i-AOI enkulu okanye i-AOI ekumda weendawo ezimbini okanye ngaphezulu, uMosaic uya kugqitywa kwiziphumo zophando.
Imeko ekukuphela kwayo yokwazisa uMosaic yiAOI
Nje ukuba ukrwele i-AOI egubungela izigcawu ezininzi, ukucoca ubumanzi kwaye usete indawo enqwenelekayo yelanga, inkqubo ibonakalisa iziphumo zoMoses zokukhangela ngomboniso oveliswe ngokwe paramitha ezizimeleyo. Inani leziganeko ezikwiMosaic licacisiwe kumakhadi okujonga kuqala.
Izakhono eziphambili zikaMoses
Sifikelele kwelona nqaku libalulekileyo. Yintoni enye esinokuyenza ngoMoses? Nje ukuba simbone uMoses kwimephu, sinokuqhubeka noku kukhetha oku kulandelayo:
Faka isicelo isalathiso kunye nokudityaniswa kweebhendi, zombini okungagqibekanga kunye nesiko.
Misela ukuqaqamba kunye noluhlu lwecala.
Uhlaziyo lwebrowser (iyeza kungekudala)
Ukubeka iliso kunye nokulinganisa indlela iimpawu zendawo ethile eziye zatshintsha ngayo phakathi kwamaxesha amabini okanye nangaphezulu exesha elinomsebenzi wokuFunda ukuFikelela.
Intsebenzo yolawulo lwendawo esebenzayo ngokuhambelana namanqanaba amaxabiso esalathiso, kusetyenziswa umsebenzi we Ukudibanisa.
Qinisekisa amandla endlela yokukhula kwezityalo kwindawo yakho enomdla kuyo (AOI) ixesha elide kunye nokhetho loThintelo lwexesha
Yenza amabali anomtsalane nge-GIF okanye ividiyo kunye nokwabelana ngedatha yakho nabanye abasebenzisi abakwi-intanethi ngeopopayi Ukuphela kwexesha.
Ukhuphelo lokukhetha olufumaneka kwi-LandViewer
Iindidi ezintathu zokukhuphela zinokusetyenziselwa iMosaic, ezi zibonakalayo, eziHlaziyo okanye ze-Index, kuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzisi.
Qaphela: umsebenzisi ukhetha uhlobo lokukhuphela «kuMoses» okanye «amaqhekeza ngobuninzi». Umahluko phakathi kwezi zikhetho zimbini ulele kwidatha yokugqibela eza kuhanjiswa kumsebenzisi: inkqubo ekhuphela iindawo ezihlanganisiweyo kunye nokukhethwa kukhetho "lukaMoses"; Inkqubo ikhuphela iziqwenga zemidlalo njengoluhlu ukuba ipharamitha «Iziqwengana ezinkulu» zikhethiwe.
Ezibonakalayo: xa ukhetha uhlobo Visual, idatha yesiphumo iya kusiwa kwi-JPEG, KMZ kunye nefomathi yefayile ye-GeoTIFF equlathe iindawo ezihlanganisiweyo (umzekelo, onke amabali awela kwi-AOI kwaye awaweli).
Uhlalutyo: isiphumo sokukhuphela kunye Uhlalutyo okhethiweyo uya kuba yifayile yeebhendi ezidityanisiweyo, ngaphandle kwemethadata (umzekelo [GeoTiff1: B02, GeoTiff2: B03, GeoTiff3: B04, GeoTiff4: B05.]).
Ngohlobo lwe Index, idatha yesiphumo yendlela yemifanekiso emhlophe iya kwenziwa njengefayile yeTIFF
Isalathiso: Qaphela "Ukhuphelo ngesityalo" ukhetho. Ukucheba kwe-mosaic kwenziwa ngokungqinelana neeparamitha zomsebenzisi, oko kukuthi, ibhokisi yebhokisi yejometri echazwe ngumsebenzisi. Kwiimeko apho iiparameter zokunqakraza zingasetwanga, onke amabala akhutshiwe ngokupheleleyo.
UMoses xa esenza
Sebenzisa i-Case 1: Ukongamela uPhuhliso loKwakha, eDubai.
Injongo: ukubona inkqubela phambili kulwakhiwo lwendawo enkulu enomdla (AOI)
Abaphulaphuli ekujoliswe kubo: Zonke iinkampani ezikwishishini lokwakha
Ingxaki: Umsebenzisi usete okanye ulayishe indawo yomdla kwaye ukhethe umfanekiso othathwe ngoJulayi 19 ukusuka kwi-2019. Isikrini esibonisa ngokucacileyo ukuba umfanekiso ngamnye awubandakanyi yonke indawo enomdla.
Isixazululo: Kule meko, umsebenzisi kufuneka akhethe ikhadi lokujonga ngaphambili elinenombolo efanelekileyo yeziganeko ezigubungela ngokupheleleyo i-AOI yakhe, yeziphumo zokukhangela ezivelisiweyo, kwaye ucofe into "kaMoses".
Isiphelo: UMoses uvumela ukubekwa kweliso kweendawo ezinkulu.
Ngaphambili, ukujonga iindawo ezinkulu kufuna ukuba umsebenzisi atshintshe phakathi kwesigcini kwaye azidibanise ngesandla. Le nkqubo yayingonwabisi kwaye ithathe ixesha elide. Ukususela ngoku, yonke into iyakhawuleza kwaye ilula: hlela i-AOI yakho kunye neLandVV yakho iya kukulawula ngokuzenzekelayo.
Icala lokusetyenziswa kwe2: Uqwalaselo lomlilo lweCalifornia
Injongo: Chaza indawo eyonakeleyo, Oko kukuthi, faka isalathiso seNBR kwaye ukhuphele indawo kaMoses.
Inkcazelo: Ngo-Novemba we-2018, kwaqhuma umlilo omkhulu eCalifornia, ubulala abantu be-85 ubuncinci. Phantse izindlu ezilishumi elinesihlanu lamawaka (14,000) zatshatyalaliswa, kwaye iipesenti ezilikhulu elinesihlanu (115,000) zehlathi zalahleka. Abaphathi bendawo bayibiza ngokuba ngowona mlilo mkhulu kwimbali yorhulumente. Olu lwazi alumangalisi, ngaphandle kwento yokuba ngaphezulu kweewaka ezilikhulu (100,000) iihektare nazo zalahleka kunyaka odlulileyo.
Abasemagunyeni baseCarlifonia bathumela abacimi bomlilo abamalunga namawaka amahlanu ukucima umlilo, abakwazanga ukugcina umlilo, owathi kwezinye iindawo wasasaza ngesantya seekhilomitha ze-130 ngeyure.
Isixazululo: Ukufumanisa umonakalo kwimimandla echaphazelekayo, kubalulekile ukuba uthelekise ii-mosaic zangaphambi nangemva kwentlekele kunye nesalathiso se-NBR esetyenzisiweyo.
Isinyathelo se1: zoba okanye ulayishe i-AOI kwindawo yakho enomdla kwaye ubeke usuku lwentlekele.
Imifanekiso ngaphambi kwentlekele ye1Isiphumo sokumela i-mosaic yokuhlawulwa komhlaba wonke wenzala (AOI).
2 nyathelo: Khetha ikhadi lokujonga kwangaphambili kunye noMoses, yiya kwitheyibhile "yokudibanisa", emva koko ukhethe isalathiso se-NDR. Kweli nqanaba, inkqubo ibonakalisa amaxabiso esalathiso ebaliwe, ebalaselwe kwiorenji-luhlaza. Okulandelayo, qhubeka nge "Khuphela» ithebhu kwaye ukhethe indawo apho ufuna idatha efanelekileyo eceliweyo.
Umfanekiso we2: indawo ene-index ye-NBR ibonisa imeko ngexesha lomlilo.
Isinyathelo se3: Khetha umfanekiso wentlekele yasemva kwendawo enye yomdla (AOI).
Umfanekiso wangaphambi kwentlekele ye3: Isiphumo sokumelwa kukaMoses kuyo yonke indawo enomdla (AOI).
Isinyathelo se4: Fumana iziphumo zokukhuphela zikaMoses usebenzisa isalathiso se-NBR, ulandele ii-algorithms ezifanayo ezifunyenwe kwisinyathelo 3.
Isiphumo se-4: Indawo yangemva kwentlekele ibonisa indawo echaphazelekayo kwaye ibona nomonakalo.
Isiphumo: Iindawo ezichaphazelekayo ziboniswe zibomvu. Ngokuthelekisa imifanekiso ngaphambi nangemva kwentlekele kunye namaxabiso e-NBR index, sinokuwuvavanya umonakalo.
Vumela uMosisi akwenzele umsebenzi
Ukuqukumbela, uMoses unikezela ngesisombululo esikhethekileyo sokufumana umfanekiso ogubungela ngokupheleleyo indawo enomdla kuyo, nokuba ungakanani, kunye neziphumo ezilungileyo. UMosaic uvumela ukudityaniswa kwemifanekiso yemihla ngemihla ye-satellite efunyenwe kwisenzi sensimbi yendawo emiselweyo, imiselwe kwangaphambili okanye ii-indexed ezenziwe ngokwezifiso kubhabho, kunye nokunokwenzeka kokukhuphela izigcawu zohlalutyo lwamva. Yithi chu kuhle kwisigqibo sokuqala, ukutshintsha umfanekiso, indawo ezingenanto kunye nokujoyina umfanekiso wesikhokelo, ngonaphakade.
Ngolwazi oluneenkcukacha malunga noMoses, jonga isikhokelo somsebenzisi weLandViewer okanye usithumele nge-imeyile ku-support@eos.com
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-STAAD-ukuyila iphakheji yoyilo ebiza iindleko ezenzelwe ukumelana noxinzelelo lolwakhiwo- eNtshona India
Post Next Ukuchaza kwakhona uMxholo we-Geo -unjineliOkulandelayo »
Impendulo yoMntu "Akusekho ndawo zingaboniyo ngeempawu zikaMoses"
IGIS Infomedia uthi:
Wow, andizange ndiyazi loo nto. enkosi kakhulu